चुनावमा कुन नेता कहाँ व्यस्त ? – SidhaRekha
चुनावमा कुन नेता कहाँ व्यस्त ?
२०७४ मंसिर १६, शनिबार ०९:३३ December 2, 2017
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मौन समय शुरु हुनै लाग्दा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको व्यस्तता ह्वात्तै बढेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्षनेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर अरु उम्मेदवारका लागि भोट मागिदिन देश दौडाहामा छन् ।
केपी ओली र प्रचण्ड कता छन् ?
शनिबार माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं-२ र पम्फा भुसालको निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर-३ का कार्यक्रममा प्रचण्ड सहभागी हुँदैछन् ।
अघिल्लोपत्रकारलाई निवृत्तिभरण र छात्रवृत्ति दिइने
पछिल्लोडडेल्धुराका मतदान केन्द्रमा आजबाट कर्मचारी खटिए